NgoNovemba ophambili kwiincwadi. Ezinye izihloko zinikezelwe kule nyanga | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Inoveli emnyama
NgoNovemba, inyanga yasekwindla ngokugqwesa, ngu ophambili kwezinye izihloko Iinoveli ezivela kumaxesha ahlukeneyo kunye nababhali abahluke kakhulu. Ukusukela kwinoveli emnyama, yangoku okanye yolutsha, UNovemba uhlala ethetha ngendawo yangaphambili okanye efanelekileyo yebali elilungileyo. Makhe siveze la mabali.
1 Iintsuku ezilishumi elinesihlanu zikaNovemba-uJosé Luis Correa
2 Kutshanje ngo-Novemba-uHans Enrich Nossak
3 Ilifu lika-Novemba-uHillary Ruben
4 U-Novemba ka-Kate-Mónica Gutiérrez
5 Ngo-Novemba-uJorge Galán
Iintsuku ezilishumi elinesihlanu zikaNovemba -UJose Luis Correa
Kuthunyelwe kuyo 2003, umbhali uJosé Luis Correa ubalisa ibali lika URicardo Blanco, oneminyaka engama-44 ubudala, okwaziyo ukukhokela ubomi ngaphandle kolwalathiso kwisixeko sakhe, eLas Palmas de Gran Canaria, a iarhente yomcuphi. Ikhomishini enikwa ngumfazi omhle ukuba ayiphande ukuzibulala yesoka lakhe liza kumthabathela emanzini kwihlabathi elinomtsalane njengoko liyingozi. Iibhari kunye neebusuku, iindawo zokuhamba ngeenqanawa kunye namaqela ye abantwana abalungileyo Ukusuka eLas Palmas, kunye nokukhohlisa okuthethwa ngumthengi wakhe.
Kutshanje ngo-Novemba -UHans Enrich Nossak
Umsebenzi walo mbhali waseJamani uye wathelekiswa nalowo UAlbert Camus, uGeorge Orwell okanye owabo uGünter Grass. Kwiminyaka engamashumi amathandathu anamashumi asixhenxe anesithathu ezakhe iinoveli zaziwayo zaguqulelwa kwiSpanish, enye yazo yile, ukusukela ngo-1968. Ngo-1961 wafumana Ibhaso likaBüchner, Kwaye kwiminyaka kamva wayeza kuthiywa ngegama Ilungu le-German Academy yoLwimi noNcwadi.
Le noveli yenziwe izahluko ezide ezithathu. Kweyokuqala, umlinganiswa ophambili uxelela umntu wokuqala ukuba ngequbuliso uthathe isigqibo sokudibana nombhali ophakathi lo wayesandula ukudibana naye. Unomdla wobukrwada bakhe, ukusikelwa umda kunye nokuthintelwa kobomi obunengqiqo kunye nelungelo lokufumana umfazi wongxowankulu kunye nomama wosapho olonwabileyo awakhokelayo nalo luyavela. Ngomzuzwana Kwisahluko, kwincoko ende notatazala wakhe, omtyelelayo kwindawo yakhe yokuhlala entsha, ubalisa into eyithethayo ukuzonwabisa kwakhe okungenangqondo kunye nokusilela ukukhululwa kwakhe okucingelwayo.
Y ekugqibeleni, kwakhona endlwini yomyeni wakhe, kukho iimeko ezinamandla ngakumbi kunentando yakhe ezikhokelela ekubeni avuke kwakhona kwimoto yesithandwa sakhe, oye wayokukhangela inxila lakhe endlwini yakhe, kwaye kwimizuzu kamva bobabini baya kufumana ukufa. Eyakhe ukwakhiwa, le ncwadi yathathelwa ingqalelo njengenye ye imisebenzi eyinkunzi yoncwadi lwangoku, ubuncinci ukusuka kwiJamani.
Ilifu likaNovemba -Hillary Ruben
Ithunyelwe kwi 2002Le yinoveli malunga nesibindi, ukuziphucula kunye nothando lwezilwanyana. Isixelela ibali lika IKonyek, umalusi oselula ophuma kwisizwe samaMasai, ocinga amawaka eziganeko. Kude kube lusuku olunye, esalusa umhlambi kunye nomzala wakhe uParmet, uyasokola Ukuhlaselwa kwamanye amaqhawe kwaye wenzakele. Umzala wakhe wamshiya wabuyela elalini, exelela ukuba uKonyek ubalekile washiya umhlambi wedwa. UKonyek wenza isithembiso se khangela ithole lakhe likaNovemba, ilahlekile emva kohlaselo.
Emva kwamathuba amaninzi kunye neengozi amfumana kwaye, nini Buyela ukuya elalini, kuya kufuneka ahambe ngesigwebo sabadala. Uya kukwazi ukuwoyisa ngenxa yesibindi sakho kunye nobukrelekrele. Uyise, ekuqwalaseleni ixabiso layo, unika uNube de Noviembre.
Kate kaNovemba - UMonica Gutierrez
Ithunyelwe kwi 2016, le noveli yi ibekwe eNgilani. Ngobusuku be ikhephuNgolwesiHlanu ngasemva kwebar ye-pirate ye-galleon bar efihliweyo, i-bartender ilindele ukufika kukaKate. UKate uyintombazana eneenwele ezihamba ngokungaqhelekanga kunye nezikhafu ezinde kakhulu.
UKate uhlala kwisakhiwo esidala. Kudala kakhulu oko eqhutywa sisiqhelo Andisayikhumbuli imeko yeenkcukacha ezincinci okanye izinto ezifihlakeleyo kumathambeka emihla ngemihla. Igadi engaqhelekanga kunye nesikhululo sikanomathotholo esijinga esibhakabhakeni kwigumbi eliphezulu lomthi yindawo yakhe yokubalekela. Kwaye nangona kwidolophu encinci yaseColeridge wonke umntu ezityeshela izilumkiso zemozulu eccentric, ixesha malunga nokutshintsha kukaNovemba kaKate ezandleni zendoda enezicwangciso zokuziphindezela.
NgoNovemba -UJorge Galán
Ikwapapashwe ngo-2016, eli libali elichazayo imfuneko yokuphakamisa ilizwi lakho, njengamaJesuit abuleweyo, ukukhusela abo bahlelelekileyo. Ngo-1989 i Uluntu lwaseSalvador Uhlala eloyikiso lwemfazwe yamakhaya. Ngenye intsasa kaNovemba ebuhlungu iqela lamadoda axhobileyo ingena kwizibonelelo zeYunivesithi yamaKatolika kwaye Ubulala amaJesuit aseSpain amathandathu kunye nabafazi ababini Igazi elibandayo.
Ngemihla elandelayo yokubulawa kwabantu, kuphela ngumphathi omtsha wamaJesuit, Utata Tojeira, uzibophelele kwaye uzibophelele ku fumanisa ababulali. Ingqina kuphela enokunceda ukusombulula imeko uthulisiwe ngabasemagunyeni. Ngoobani kwaye bathotyelwa ngubani izaphuli-mthetho?
Sinezandla zethu inoveli ekhaliphileyo ephanda iinyaniso ezimangalisayo eyothusa i-El Salvador kunye ne-Latin America ngo-1989. Ikwangena nakwimbali yolunye ulwaphulo-mthetho, olufana nolo UMnumzana Romero.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » NgoNovemba ophambili kwiincwadi. Ezinye izihloko zinikezelwe kule nyanga
I-JFK ichaze. Ezinye iincwadi zinomfanekiso wakhe ngasemva